International Sushi Day 2021: Wasabi akaronga imwe yeanonyanya kufarira condiments eUS
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » International Sushi Day 2021: Wasabi akaronga imwe yeanonyanya kufarira condiments eUS
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Culinary • tsika nemagariro • Nhau Dzakanaka • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
Yepasi rose Sushi Zuva 2021
Hwerengedzo yemakumi mana nematatu emakondoni pamwe nemakumi mashanu nemashanu emhando dzakasiyana dzemakondeshiti akaongororwa kuti awane akakurumbira (zvichibva pakutsvaga data) mune makumi matatu nemashanu enyika dzakapfuma kwazvo pasi.
VeFoodies kutenderera pasirese vanopinda muCalifornia rolls, nigiri uye sashimi paInternational Sushi Day.
Vagari vemuHungary neSouth Korea vari pachena zvinonhuwira vadikani, iine yakasarudzika sushi inoperekedza wasabi inoratidza inonyanya kufarirwa munyika yega yega.
YeJapan horseradish yakabuda seyakanyanya kufarira condiment mu13 ye50 US inoti.
NeChishanu Chikumi 18th inoratidzira International Sushi Day, uye sevanhu vanodyira kutenderera pasirese vachipinda muCalifornia rolls, nigiri uye sashimi, iko kutsvagurudza kwazvino kunoratidzira zvakanakisa zvakanangana nekusimudzira chikafu cheJapan kuenda padanho nyowani.
Chidzidzo chitsva chakatarisa mukati memunyowani anozivikanwa pasi rose kuitira kuti uburitse pachena kuti ndeapi makwikwi anotora nyika dzakasiyana. Hwerengedzo yemakumi mana nematatu emakondoni pamwe nemakumi mashanu nemashanu emhando dzakasiyana dzemakondeshiti akaongororwa kuti awane akakurumbira (zvichibva pakutsvaga data) mune makumi matatu nemashanu enyika dzakapfuma kwazvo pasi.
Vagari vemuHungary neSouth Korea vari pachena zvinonhuwira vadikani, iine yakasarudzika sushi inoperekedza wasabi inoratidza inonyanya kufarirwa munyika yega yega. Iyo yeJapan horseradish zvakare yakabuda seye inodiwa condiment mu13 ye50 US inoti; kusanganisira Ohio, Kentucky, Tennessee, South Carolina uye West Virginia.
Wasabi zviri pachena inodiwa pakati pevadi veSushi, asi ndezvipi zvimwe zvinonamira uye nemisupu inofambidzana zvinogona kuwedzerwa kune hove dzako dhishi iri reInternational Sushi Day yekusimbisa iwo mavhenekero ewaunofarira odha?
Sosi sosi (45,000 pamwedzi kutsvaga kweUS)
Inofungidzirwa imwe yeakaravira yakawanikwa nevakawanda, soy muto inowanzo gadzirwa uchishandisa iyo yakaviriswa pasita yenyuchi, uye inopa yakasarudzika munyu, umami kunhuvira kune sushi.
Pakutanga kurumbidza kubva kuChina, soy muto yakashandiswa muAsia yekubika kweanopfuura makore chiuru, kutanga kusvika muEurope kuburikidza neHolland muma1,000.
Kune akasiyana akasiyana esosi muto zvichienderana nekuti akasimba kana akapfava, mukobvu kana anonwisa mvura vanhu vanoifarira kuve iri. Yerima soy muto ine tsvuku tsvuku ruvara uye munhuwi unopinza, nepo mwenje soy muto unogadzirwa uchishandisa shoma gorosi uye ine inotapira hwema.
Ginger yakasanganiswa (16,000 pamwedzi kutsvaga kweUS)
Inowanzo kuwanikwa padivi pe wasabi uye soy muto pamatafura mumaresitorendi mazhinji echiJapan, ginger yakasanganiswa, dzimwe nguva inonzi 'mota', chikamu chakakosha cheiyo sushi mabiko.
Ginger yakagunzwa zvinoshamisa kuti zviri nyore uye zvakachipa kugadzira chero husiku husiku hwakagadzirwa, zvese zvaunoda hafu yepondo yenyowani mwana ginger, 1 mukombe weisina kuvhurwa mupunga wevhiniga, 30g yeshuga, teaspoon yemunyu uye mvura inovira.
Rice vhiniga (23,000 pamwedzi kutsvaga kweUS)
Yakagadzirwa kubva mupunga wakaviriswa uye ichibva kuEast Asia, mupunga wevhiniga chinhu chinonyanya kudyiwa cheJapan chinoshandiswa kutapira zvipfeko, saradhi uye sizi mupunga.
ChiJapanese mupunga wevhiniga ine hunyoro hwakapfava uye hwakapfava, hune ruvara kubva pane yakajeka kusvika yero yero. Nyama nehove zvinowanzo nyudzwa muvhiniga yemupunga kuitira kudzikisa uye hwema hwakasimba hwavanogona kupa.
Ponzu muto (47k pamwedzi kutsvaga kweUS)
Iyo yakasarudzika chiJapan condiment iyo iri kuwedzera kuwedzera kuve inozivikanwa muWestern nyika, ponzu muto isitrus-based sauce ine tangy uye tart kuravira, kwete zvakasiyana ne vinaigrette.
Zvinongedzo zvine ponzu- muto wecitrus wesudachi, yuzu, kabosu nevhiniga- yakasanganiswa nesoya muto neshuga.
Chinhu chinozorodza zvakanyanya, ponzu muto unoita zvakakwana kuenderana nesushi ndiro. Inoita chikafu chinonaka chegungwa chinocheka muto, seyakasiyana-siyana marinade yezvakakangwa nyama kana miriwo kuti ipe yako BBQ chiJapan chinokanganisa, kana kupfeka pamasaladhi uye inotonhorera madhodhi madhishi echikafu chakakwana chezhizha.
Eel muto (26,000 pamwedzi kutsvaga kweUS)
Usarega iro zita richikukanganisa, hapana zvirokwazvo eel yakavandira mune ino inonaka muto. Inongodomwa zita mushure mechikafu icho chaive chakasikwa kuti chiende pamwe chete, vanhu vasati vaona kunakirwa kwachingaita kudiridzwa pane zvimwe zvese!
Inosanganisira zvitatu chete - soy muto, chena shuga uye mirin (yeJapan mupunga waini) - eel muto inoumba yakasviba yakasviba sisitimu yekushongedza iyo yakakwana kushandira pamwe nechero rudzi rwehushi, hove yakakangwa, nyama kana saradhi ndiro.